Top 5 Ihe na-eme On A Short Gị Iji Luxembourg | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 5 Ihe na-eme On A Short Gị Iji Luxembourg
(Emelitere ikpeazụ On: 03/01/2020)
Luxembourg City bụ a kpokọtara Nchikota oge ochie ma n'oge a tinyere obodo na zuru ụwa ọnụ, mfe na okomoko. Ọ dị mma ikwu na na niile a eclectic nhọrọ, e nweghị ohere ị ga-esi gwụ. Ọ bụ ya mere na ọ bụ ike ka anyị na-akpọ aha naanị Top 5 ihe na-eme na a obere nleta Luxembourg. ma, anyị ga-enye ya a laa!
Nke a ọmarịcha obodo awade na-akpali akpali ngwakọta nke akụkọ ihe mere eme, omenala, art na eke Okirikiri. Na ọtụtụ nke European Union itieutom na ngalaba kwadoro na Luxembourg City, e nwere ezigbo multicultural n'ọnọdụ obodo a.
Na ya ọtụtụ ngosi na ngosi ihe mgbe ochie, castles na e wusiri ike, Luxembourg agwakọta ihe ịrịba iche iche nke na-akpali omenala ebe. The omenala na nkà Luxembourg bụ ezi echiche nke ndị bi na ya, iche iche ma multicultural. Luxembourg nwere ike ịbụ mpako nke ya n'ụwa nile pụrụ iche omenala eme mgbanwe site na nkà na omenala na na ememme. Na iji mee ka ọ mfe n'ihi na ị na-achọpụta art na omenala na Luxembourg, Luxembourg maka Tourism kere Luxembourg Card: free ohere karịa 60 omenala ebe na Luxembourg na Greater Region.
Dị ka akụkụ nke Top 5 ihe na-eme na a obere nleta Luxembourg, ị kwesịrị ị na maa ileta Letzebuerg City Museum. The ngosi nka na-chọpụtara na anọ mere ihe akụkọ ụlọ. The na-adịgide adịgide ngosi "The Luxembourg Story" na-egosi na ihe karịrị puku afọ akụkọ ihe mere eme nke isi obodo nke Grand Duchy. Next ọtụtụ mbụ akpọkwa, ngosi ọnọde mmepe nke obodo site na iji usoro nke mepere emepe ụdị. Nwa Oge ngosi na-ẹkenịmde mgbe nile na abụọ ọzọ na-etoju nke ngosi nka. Ike n'aka-elele ihe ha mgbe ị gara!
Casemates du Bock bụ nnọọ mfe inweta n'okpuru mbụ nnukwu ụlọ, Montee de Clausen. The Bock Casemates bụ a 17 kilometa ogologo ọwara, ibido pịrị si n'oké nkume site Spanish n'etiti 1737 na 1746. The casemates na-mara maka ya akụkọ ihe mere eme dị mkpa na Luxembourg, ịbụ a ndo karịa 35,000 obodo na ọtụtụ puku ndị agha n'oge WWI na WWII. Esịnede ikuku amaokwu na nnukwu nkume stairways, akụkọ ihe mere eme ọwara nke Casemates bụ a UNESCO World Heritage Site. Ana ndị cellphones na abịa na akpa. Nke a bụ a ga-ahụ na gị na Top 5 ihe na-eme na a obere nleta Luxembourg!
Cologne ka Luxembourg Ụgbọ oloko
Frankfurt ka Luxembourg Ụgbọ oloko
Amsterdam na Luxembourg Ụgbọ oloko
Rotterdam na Luxembourg Ụgbọ oloko
3. Religious Heritage na Luxembourg
Ndị nwere mmasị nketa okpukpe ga-eleta ndị Quirinus uka. A gothic njem uka wuru na 1355 na obere awara awa na nkume. On ya na saịtị, e mbụ a mba nile okpukpe Shinto nke ndị Rom gasịrị ofufe dị ka ihe Ndị Kraịst oge mbụ ebe nsọ. A nkume isi iyi surges ebe a. People ẹdọhọde a bara uru na-agwọ ike na mmiri ya na ikpe nke na anya ọrịa.
Ebe ọ bụ na narị afọ nke 11, na ebe a na-nsọ ka Saint Quirin na site ná mmalite nke 13, ọrụ ndị ahụ na abụọ n'ọgba nke uka.
The Gothic njem uka e wuru na 1355, mgbe ụlọ na obere mgbịrịgba-elu e kwukwara emesia, na njedebe nke narị afọ nke 19.
St Michael si Church bụ ndị kasị ochie ụka na Luxembourg obodo na e bibiri na reconstructed ọtụtụ ugboro n'oge gara aga ọtụtụ narị afọ. Saint Michel si Church bụ otu n'ime okpukpe ndị kacha ochie ụlọ ke Luxembourg. The ụlọ si akụkọ ihe mere eme ụbọchị laghachi 1987 mgbe agụ nke Luxembourg wuru a obere uka n'ime ya nnukwu ụlọ elu. The ugbu ụka agwakọta a Romanesque facade na Gothic bughi ihe na Baroque ime decorations. Rịba ama kapịrị ọnụ arches na nave. Large ntụpọ windo enyo. A ọnụ ọgụgụ nke okpukpe ọkpụkpụ. And the huge Assumption of the Virgin painting mounted upon the Baroque altar.
4. Palais Grand-Ducal na a obere nleta Luxembourg
Ọ bụrụ na ije bụ gị ihe, mgbe Palais Grand-Ducal kwesịrị ịbụ akụkụ nke Top 5 ihe na-eme na a obere nleta Luxembourg. Dị ka ihe mbụ obibi nke Grand Duke na ezinụlọ eze, Grand Ducal Obí na Luxembourg City bụ a ikpọ mpempe ije, wuru na narị afọ nke 16 n'oge Flemish Renaissance. N'obí si n'ime ime imewe yiri ka na-enwekwa Nchikota a dịgasị iche iche nke ekwekọghị. A siri interplay n'etiti ihunanya na ochie-gothic style, na ulo oru ìhè aghụghọ site German ulo oru mmebe – Ingo Maurer.
5. The Chocolate House na Luxembourg City
The Chocolate House na Luxembourg mara maka ya chocolate N'ezie. Ma, e wezụga sweet ata aru na a dịgasị iche iche nke achịcha, i nwere ike na-enweta ha savory achịcha na salads. Mgbe Ofel jupụtara, you can always sit inside on the ground floor or upstairs.
The Chocolate House na nsogbu n'ihu Grand Ducal Obí. Ntre oche gị na-enwe a Hotchocspoon. Anyị ji n'aka na ị ga-eme ka Chocolate House ọkacha mmasị gị mgbakọ. -agaghị echefu echefu, na-enweghị ahụmahụ, na niile na-adabere.
Maka ihe mmezi ego nke fun, adịghị uche na Summer na City Festival. Ọ na-ewe ebe site na nsọtu June ruo mgbe mmalite nke September. N'oge a ị nwere ike enwe free concerts, ahịa, ngosi na egwuregwu ihe nile na obodo.
Catch a train to Luxembourg using SaveATrain! Ihe kacha mfe na kacha ebe ka akwụkwọ gị ahụmahụ gburugburu Europe.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-things-short-visit-luxembourg%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / tr na / ma ọ bụ na / de na ndị ọzọ asụsụ.